कांग्रेसको नेतृत्व कसले गर्ला ? - नेपालबहस
कांग्रेसको नेतृत्व कसले गर्ला ?
| १२:५९:४३ मा प्रकाशित
२८ असोज, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगेसले ढिलोचाँडो चौधौं महाधिवेशन गर्छ नै । भलै अहिले कोभिडको त्रास देखाएर संस्थापन पक्षले केही समय लम्ब्याउला । निर्धारित समय त एकवर्ष पूरा भइसक्यो । तर सभापति शेरबहादुर देउवाको अकर्मण्यता र असन्तुष्ट पक्षको लालची स्वभावले कार्यकाल लम्बिएको हो ।
यही वर्षको फागुनमा चौधौं महाधिवेशन गर्ने तिथिमिति निर्धारण भईसक्दासमेत सदस्यता नवीकरण जस्तो आधारभूत काम पनि अवरुद्ध छ । त्यसैले फागुनमै नहोला तर भदौ उता जान र लान सक्ने अवस्था देउवाका लागिसमेत सहज छैन । त्यसैले भदौसम्म महाधिवेशन पक्कै हुन्छ ।
अब स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ, कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व कसले गर्ला वा गर्नुपर्ला ? यो प्रश्नको उत्तर गुटगत रुपमा विभक्त पार्टीका कार्यकर्ताले अनुकुलताका आधारमा देलान् । तर नेपाली कांग्रेसलाई साँच्चै नै हृदयदेखि माया गर्नेले दिने उत्तर कतिपयलाई बिझाउने हुन सक्छ । जसले मुख नहेरी रुखलाई मात्रै भोट हालेको छ उसको जवाफ सही हुन्छ । त्यस्ता कार्यकर्ताको कांग्रेसमा स्थान छैन ।
त्यसैले बाध्य भएर नेता कार्यकर्ता कुनै न कुनै गुटसँग आवद्ध छन् । पार्टी सभापतिले नै गुटलाई बढी पोस्ने नीति लिएका कारण कांग्रेसमा विभिन्न गुटउपगुटले मलजल पाएका छन् । एउटा सानो झुण्ड बोकेर पदको बार्गेनिङ गर्ने लहड र होडबाजी नै चलेको छ । जसले गर्दा कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद सिटौलाहरुको पसल राम्रै गरी चलेका छन् ।
व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि उनले गरेका काम कारवाहीले गत आम निर्वाचनमा उनकै नेतृत्वमा कांग्रेसको लज्जास्पद पराजय भएको छ । प्रतिपक्षमा रहँदासमेत उनी कम्युनिष्ट नेताहरुसँग हिमचिम बढाएर सत्ताको भागबण्डा खोज्न तल्लिन छन् । यिनबाट कांग्रेसले कुनै लाभ पाउन सक्दैन् । त्यसैले पार्टीले देउवाबाट मुक्ति पाए सबैभन्दा उत्तम ।
तर अब समय आईसक्यो, गुटको राजनीति त्यागेर एकताबद्ध हुने । ठूलो र सत्तामा भएका बेला यस्ता गुट उपगुटले अर्थ राख्छ । तर प्रतिपक्षमा त्यो पनि मरिच झैं चाउरिएको अवस्थामा कांग्रेस गुट उपगुटबाट माथि उठ्नै पर्छ । नत्र आगामी आम निर्वाचन भीमकाय बनेको नेकपासँग लड्नु छ । त्यसका लागि कांग्रेसले सबैलाई एकताबद्ध बनाउने नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कुन पात्र अबको चुनौती सामना गर्न सक्ने हैसियतको होला त ? माथि नै भनियो उत्तर गुटगत रुपमै आउने हो । तर यो प्रश्नको उत्तर फेरि पनि उही मुख हैन रुख हेर्नेसँग गरियो भने चाहिं सही उत्तर पाउन सकिन्छ ।
एकपटक अहिलेका सम्भावित नेताहरुको बारेमा चर्चा गरौं । वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा । चारचार पटक त देशको कार्यकारी प्रमुख नै भइसके । नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापति हुनुपूर्व प्रजातान्त्रिक कांग्रेसका सभापतिसमेत थिए देउवा । त्यस हिसावले हेर्ने हो भने उनी दुईपटक कांग्रेस सभापति भए । यद्यपि वैधानिक रुपमा भने नेपाली कांग्रेसको उनले एकपटक मात्रै नेतृत्व गरेका छन् । उनी अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि सबैभन्दा प्रमुख दाबेदार ।
तर विगत हेर्ने हो भने उनी प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति दुबै पदमा सर्वाधिक फेलियर । उनी जब पदमा हुन्छन् केही न केही काण्ड मच्चाईहाल्छन् । संसदीय व्यवस्थालाई विकृत बनाउने सूचीमा उनको नाम सिरान मै पर्छ । प्रजातन्त्र भन्दा उनका लागि पद महत्वपूर्ण देखिएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा प्रजातन्त्र सुम्पने गौरवशाली इतिहास उनैले रचे । व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि उनले गरेका काम कारवाहीले गत आम निर्वाचनमा उनकै नेतृत्वमा कांग्रेसको लज्जास्पद पराजय भएको छ । प्रतिपक्षमा रहँदासमेत उनी कम्युनिष्ट नेताहरुसँग हिमचिम बढाएर सत्ताको भागबण्डा खोज्न तल्लिन छन् । यिनबाट कांग्रेसले कुनै लाभ पाउन सक्दैन् । त्यसैले पार्टीले देउवाबाट मुक्ति पाए सबैभन्दा उत्तम ।
अब अर्का वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका कुरा गरौं । तुलनात्मक रुपमा अध्ययनशील मात्र होइन, विषयवस्तुमा पकडसमेत उनको छ । कांग्रेसको सैद्धान्तिक पक्षमा प्रवचन दिन उनी हच्कँदैनन् । तर उनको सानो मन र चित्तले कहिल्यै कांग्रेसको नेतृत्व गर्न सकेन । उनी पनि फेरि उम्मेदवार बन्ने ध्याउन्नमा छन् । देउवाले चाहना राख्दा पौडेल पछि हट्नुपर्ने कारण नहोला । तर साथीभाईलाई समेट्न नसक्ने उनको स्वभाव उनका लागि ठूलो तगारो बनेको छ ।
त्यसैले देउवाइतर समूहमा उनी एक्ला उम्मेदवार रहन सकेनन् । प्रकाशमान सिंह, डा. शेखर कोइराला, शशांक कोइराला उनी पक्षका सबल दाबेदार हुन् । उनलाई आशा छ, यीमध्ये कसैका नाममा सहमति नहुँदा अन्ततः म नै एक्लो उम्मेदवार हुनेछु । तर परिस्थिति उनले सोचेअनुसार देखिंदैन ।
शेखर र शशांकबीच अहिले उम्मेदवारीलाई लिएर रस्साकस्सी भएको देखिन्छ । गएको महाधिवेशनलगत्तै शेखर देश दौडाहामा छन् भने शशांक चाहिं महामन्त्री भएयता लगभग सुतेरै बसेका छन् । शशांकबाट पार्टी नेतृत्व सम्हालिने अवस्था क्षीण रहेको टिप्पणी शेखर निकट नेताहरु भन्छन् । स्वयं शशांक निकट मानिएका कतिपय नेता कार्यकर्तासमेत धेरै आशावादी छैनन् ।
किनभने शशांकमा आक्रमक स्वभाव र कम्युनिष्टसँग लड्ने अक्कल छैन, जो उनका पिताजीहरुमा थियो । सानुबुवा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वभावले नै पार्टीमा नयाँ उर्जा दिन सक्छ भन्ने ज्ञान भएपनि त्यो क्षमता शशांकमा छैन । तर शेखरमा भने त्यो लडाकापन देखिएको छ । त्यसैले आम कार्यकर्ताले एकपटक शेखरको नेतृत्व कांग्रेस खोजेको प्रतीत हुन्छ । यसका पछाडि अर्काेपनि कारण छ, शेखरले अहिलेसम्म देखिने गरी गुट बनाएका छैनन् ।
अब एकपटक दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको नेतृत्वमा युवाजमातले कांग्रेस चलाउनुपर्छ । त्यसका लागि शेखर, शशांक र प्रकाशमानहरुको नेतृत्वमा धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, गुरुराज घिमिर, गोविन्द भट्टराई, प्रदीप पौडेले जस्ता युवाहरुको पकड हुनुपर्छ ।
प्रकाशमानको कुरा गर्दा उनी गणेशमानको छोरा हुन् । स्थापनाकालदेखि आजको अवस्थामा आइपुग्न कांग्रेसले धेरै उकालीओराली चढ्नुप¥यो । त्यसमा गणेशमान, मंगलादेवी र प्रकाशमानको समेत उल्लेख्य भूमिका थियो । कांग्रेस उपसभापतिसमेत भइसकेका उनी उपप्रधानमन्त्री पनि भएका व्यक्ति हुन् । जसले गर्दा देउवाइतर पक्षबाट उनी सबैभन्दा मुख्य दाबेदारमा गनिन्छन् ।
तर उनको पक्षमा आम कार्यकर्ताको आकर्षण भने छैन । काठमाडौंकै नेताहरुसँग समेत उनको गतिलो सम्बन्ध छैन । देशभरिका कार्यकर्ताले गणेशमानको छोराका रुपमा मात्रै उनलाई चिनेको अवस्था छ । त्यसैले एक्ला उम्मेदवार भैहाल्दा पनि उनको पक्षमा माहोल बन्ने सम्भावना धेरै छैन ।
उता, देउवा अहिलेसम्म आफ्नाे खेमाबाट एक्ला उम्मेदवार छन् । यद्यपि विमलेन्द्र निधिलेसमेत अहिले दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् । निधिको उम्मेदवारीलाई कसैले हल्का रुपमा लिएका छन् भने कतिपयले यसको प्रभाव देउवामाथि पर्ने लख काटेका छन् । अन्ततः देउवालाई नै निधिले समर्थन गर्ने धेरैको अनुमान छ । जबकी संस्थापनइतर पक्षमा त्यो स्थिति छैन ।
कांग्रेसजनमा एउटा चेत अब भने खुल्नैपर्ने भएको छ, त्यो के भने हिजोका थोत्रा नेता र नीतिले नयाँ कांग्रेस बन्दैन र चल्दैन पनि । अबको कांग्रेसमा नयाँ भिजन हुनैपर्छ , जसले युवा पुस्तालाई आकर्षित गरोस् । त्यसका लागि अहिले भरपर्न सकिने केही युवा पुस्ताका नेताले पहलकदमी लिनु आवश्यक छ । साथै, एकलढंगले कांग्रेस चलाउँछु भन्ने दम्भले अब काम गर्दैन । कांग्रेस भनेको पाका र युवाको फ्युजनबाट मात्रै तयार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नयाँ खाले समीकरण बन्नु आवश्यक छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने अब एकपटक दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको नेतृत्वमा युवाजमातले कांग्रेस चलाउनुपर्छ । त्यसका लागि शेखर, शशांक र प्रकाशमानहरुको नेतृत्वमा धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, गुरुराज घिमिर, गोविन्द भट्टराई, प्रदीप पौडेले जस्ता युवाहरुको पकड हुनुपर्छ । पछिल्लो समय शेखर, प्रकाशमान र गगनबीच यस्तै गठबन्धन बनेको खबर चुहिएको छ ।
शेखरलाई सभापतिमा खडा गर्न गगनले प्रकाशमानलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने गरी टिम बनाउन सुझाव दिएका छन् । यस्तो खाले गठबन्धनले पार्टीलाई नयाँ उर्जा दिन सक्छ । बरु युवा पुस्ताका धनराज गुरुङ, एनपी सावद, गोविन्द भट्टराई, प्रदीप पौडेल लगायतका नेतालाई यो गठबन्धनमा ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यसको पहल गर्ने जिम्मा पनि दोस्रो पुस्ताकै काँधमा आएको छ । हेरौं , यस्तो माहोल बन्यो भने चाहिं कांग्रेस फेरि जनजनको मनमा बस्न सक्ला नत्र भन्न कठिन छ ।
संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न सभापति देउवाको आग्रह १ हप्ता पहिले
जखेरा तालमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको घुइँचो १५ घण्टा पहिले
नबिल बैंकलाई एडीबीकाे अवार्ड २० घण्टा पहिले
दशैँमा दुई युवा समूहबीच झडप : एकको मृत्यु, चार जना पक्राउ ! १६ घण्टा पहिले
सीमामा जनशक्ति थप्दै सशस्त्र प्रहरी ३ हप्ता पहिले
एक सय एकतीस किलो गाँजासहित एक जना पक्राउ ३ हप्ता पहिले
भियतनाममा बाढीबाट ९० जनाको मृत्यु २ हप्ता पहिले
काठमाडौंमा थप १५ जनालाई संक्रमण ३ महिना पहिले
जहाँ बन्दैछ, कोरोनाविरुद्ध लड्ने हतियार ६ महिना पहिले
पहिरोले म्याग्दीको हिलबाङ खोला थुनियो : तल्लो क्षेत्रका गाउँ जोखिममा २ महिना पहिले
आज बिहानैदेखि काठमाडौंमा झरी, देशभर वर्षाको सम्भावना १ वर्ष पहिले